जुलाईमा ७३ हजार २८५ विदेशी पर्यटक नेपाल आए, कुन देशबाट कति आए त ? — News of The World
जुलाईमा ७३ हजार २८५ विदेशी पर्यटक नेपाल आए, कुन देशबाट कति आए त ?
राससभाद्र १, २०७५
१ भदौ, काठमाडौँ । सन् २०१८ को जुलाईमा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
सन् २०१८ को सात महीनामा पाँच लाख ९३ हजार २९९ जनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१७ को तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । पर्यटक आवागमनको याम नहुँदासमेत बोर्डले प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई बढावा दिएका कारण पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जानकारी दिए ।
भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा गत वर्षको सोही महीनाको तुलनामा ८०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) क्षेत्रका मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा ६६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत गत वर्षको सोही महीनाको तुलनामा १२५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।